Akoonka Ganacsiga gt.io | Africa
/ Akoonka Ganacsiga gt.io
Farqiyada u dhaxeeyo dalabka waxay ku xirantahay xaaladaha suuqa oo waxay saameyn kartaa ku dhawaaqyada aqbaaraha, dhacdooyinka caalamka aan la filaneyn, xasiloonida siyaasada, ama waqtiga maalinta iyo isbuuca (tusaale ahaan, qiimaha ugu dambeeyo caadi ahaan wuu ka hooseeyaa dhammaadka maalinta iyo dhammaadka isbuucyada). Balaarinta farqiyada u dhaxeeyo dalabka waa natiijada sharuudahan suuqa xiggo, oo ma saameeyaan Shirkada.
Qiimayaasha dulsaarka waxaa saameeyo qiimaha dulsaarka interbank, oo maraan saxitaano maalinle ah sida lagu qeexay Goobaha Fullinta Kala duwan / Bixiyayaasha Qiimaha ugu dambeeyo, iyada oo aan jirin ogeysiin hore. Qiimaha dulsaarka ee Lacagaha dhijitaalka waxaa lagu dalacaa 4 saac ee walba.
Koontooyinka qidmada go'an
Macaamiisha waxay codsan karaan Koontooyinka qidmada Go'an kaliya sababo diimeed dartood, iyo xiliga maalgelinta koontadooda. Shirkada ayaa leh xaquuqda lagu diidayo arji walba oo loogu tallogalay Koontada qidmada Go'an. Joogaga Aan caadiga aheyn iyo Lacagaha dhijitaalka kuma jiraan Koontooyinka Qidmada Go'an. Dacwado noocaas ah, macaamiisha waxaa loogu shubayaa/laga jarayaa sida qeyb ka ah is dhaafsiga habeen dhaca caadiga ah.
Sharuudaha Deynta shirkada dullaalka
Sharuudaha Deynta shirkada dullaalka way ku kala duwanaan kartaa calaamadaha iyo cabbirka xaddiga furan. Shirkada waxay isticmaali kartaa iqtiyaarkeeda gaarka ah oo lagu saxayo sharuudaha deynta shirkada dullaalka ka hor dhacdooyinka suuqa imaanayo ama inta lagu jiro muddada hubaal la'aanta siyaasada oo si suurtogalka ah halis u gelinayo suuqyada dhaqaalaha. Tani waxaa loo sameeyaa si loo illaaliyo lacagaha Shirkada iyo macaamiisha labadaba , waxaana lagu fullin karaa iyada oo aanay jirin ogeysiin. Shirkada waxay sidoo kale balaarin kartaa badeladaas loogu tallogalay haddiiba loo arko mid muhiim ah. Sharuudaha Deynta shirkada dullaalka / Raasumaalka amaahda waxay sidoo kale way isbadeli kartaa sabab la xiriirto xeerarka quseeya ee wadankaaga daganaanshaha. Wixii dib u eegis buuxdo ah ee sharuudahaan, waxaad tixraaci kartaa qeybta Sharuudaha Deynta shirkada dullaalka/Raasumaalka anaahda.
Tirada Saamiyada Ugu yar / Ugu badan
Tirada Saamiyada Ugu badan iyo Ugu yar way ka duwanaan kartaa inta u dhaxeyso aastaamaha ganacsiga. Fadlan tixraac sharuudaha ganacsiga ee nooc kasta oo hantida ka mida.
Lacag dhigashada ugu yar ee looga baahan yahay Bank Wire waa USD 100, EUR 100 iyo ZAR 2000.
Heerarka Xadeynta iyo Joogsiga
Heerarka Xadidan iyo Joogsiga waxaa laga helayaa boggaada ganacsiga macmiilka ee ka hooseeyo Qeexitaanka aastaan walba.
Kulamada Ganacsiga waa GMT + 3 (Waqti Aqriyaha).
Shirkada waxay xaq u leedahay inay isbadesho Ka xiritaanka Booska iyo Heerarka Hoos u dhaca Sharuuda deynta shirkada oo ka bilaabanayo boqolkiiba 50% illaa100%, iyo ka bilow 100% illaa 150% sida quseyso, oo dhammaan akoonada, oo gudaha hal saac ee xiritaanka waqtiga madasha ganacsiga Jimco walba. Badeladaan waxaa lagu kordhin karaa haddiiba loo arko muhiim kadib furitaanka suuq geynta.
Fullinta dalabka waa Suuqa. Tani waxaa loola jeedaa in dhammaan dalabyada lagu fulliyo qiimaha suuqa la heli karo oo dhinaca Bixiyayaasha Qiimaha ugu dambeeyo. Barnaamijkeena kumbuyuutarka wuxuu isku daraa dhammaan qiimayaasha laga helay Bixiyayaasha Qiimaha ugu dambeeyo, si markaas macaamiisha ay kadib uga faa'ido qiimaha suuqa ugu dambeeyo.
Saxitaanada saami qeybsiga waxaa loo isticmaalaa Badeecooyinka iyo Tusmooyinka Kaashka markii boosaska ku sii furnaadaan taariiqda saami qeybsiga hore. Macaamiisha boosas iib akoonadooda ku haysta waxa loogu shubi doonaa xaddi faa'iido qaybsi. Macaamiisha haysto boosaska iibsiga waxaa laga jarayaa cadadka saami qeybsiga.